किन यति धेरै जवान महिलाहरू अझ पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर श्रीमान्‌का थर प्रयोग गर्छन्?:: Naya Nepal
किन यति धेरै जवान महिलाहरू अझ पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर श्रीमान्‌का थर प्रयोग गर्छन्?
महामारीकाबीच विवाहका योजनाहरूमा कैयौँ अनिश्चितता देखिए पनि ३० वर्षे लिन्डसे एभान्स एउटा विषयमा भने स्पष्ट छिन्।
“विवाहको मिति जति नजिक आउँदैछ त्यति नै म उसको थर अपनाउने विषयमा सकारात्मक हुँदै गएकी छु,” सन् २०२१ को जुलाईमा विवाह गर्ने तयारीमा रहेकी क्यालीफोर्नियाकी ती युवतीले भनिन्।
आफ्ना अभिभावकसँगै उनी जीवनशैलीबारे सामग्री छाप्ने एक सञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्छिन्।
विवाहपछि अमेरिकामा अधिकांश (करिब ७० प्रतिशत) महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌को थर अपनाउने गरेको एउटा अध्ययनले देखाउँछ।
लिन्ड्से इभान्स आफ्ना भावी पतिको थर अपनाउन चाहन्छिन्
“यति धेरै महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान्‌को थर राख्नु आश्चर्यजनक छ। किनकी यो पितृसत्तात्मक इतिहासबाट निर्देशित छ, यस्तो सोच जसमा विवाहपछि महिला एक पुरुषको सम्पत्ति बन्न पुग्छन्,” यूकेस्थित युनिभर्सिटी अफ ब्राडफोर्डमा पारिवारिक जीवन विषयका प्राध्यापक साइमन डङ्कनले भने।
उनले पुरुषको थर अपनाउने अभ्यासबारे अनुसन्धान समेत गरिरहेका छन्।
कैयौँ महिलाहरूले आफ्ना पार्टनरसँग एकबद्धभएको महसुस गर्नका लागि श्रीमानको थर अपनाउने गरेको बताएका छन्
स्पेन, आइसल्यान्ड अनि ग्रीसजस्ता केही देशबाहेक अधिकांश पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि यो प्रथा व्याप्त छ।
“प्रश्न के रहन्छ भने… के यो मात्र एउटा हानि बेगरको परम्परा हो वा उ बेलादेखि अहिलेसम्म त्यसमा केही अर्थ छ?” यो प्रश्न डङ्कनलाई सोधौँ जसले ओस्लो विश्वविद्यालय र युनिभर्सीटी अफ वेस्ट अफ इङग्लयाण्डका शिक्षाविद्हरूसँग मिलेर यसको कारण पत्ता लगाउन लागि परेका छन्।
अमेरिकामा बिहे भएपछि धेरै महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌को थर राख्ने गरेका छन्
पहिलो – पितृसत्तात्मक शक्तिको जड र दोस्रो असल परिवारको आदर्श जसमा आफ्नो जीवनसाथीसँगको साझा नाम हुनुले प्रतिबद्धताको सङ्केत गर्ने र आफू अनि आफ्ना सम्भावित बच्चाहरूलाई एक ढिक्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने बुझाइ पाइन्छ।
थर परिवर्तन गर्ने कुरालाई पुरुषले महिलालाई प्रेम प्रस्ताव वा विवाहको प्रस्ताव गर्ने परम्परासँग पनि जोडेर हेरिएको छ
“मलाई लाग्छ की यसले हामीलाई एक व्यक्ति मात्रै नभएर परिवारका रूपमा पहिचान दिएको छ,” क्यालीफोर्नियाकी लिन्डसे एभान्सले भनिन्।
“हाम्रो पहिलो अनि बीचको नामले व्यक्तिगत पहिचान गराउँछ। तर एउटै थर हुनाले हामीलाई एक भएको प्रत्याभूति दिलाउँछ।”
‘आदर्श परिवार’को धारणा सन्तान भएका महिलामा अझ प्रगाढ भएको शोधपत्रमा उल्लेख छ। विवाह गर्दा थर बदल्न नमानेकाहरूले समेत आमा बनेपछि आफ्नो दृष्टिकोण बद्लेको पाइएको छ।
केही महिलाहरू पुरुषको थर लिने हो भने त्यसले महिलावादी आन्दोलनलाई फाइदा नपुर्‍याउने बताउँछन्
डङ्कनको अध्ययनले अभिभावकहरूमा रहेको अर्को समान धारणाको पनि चर्चा गरेको छ। फरक-फरक थर हुँदा आफ्ना सन्तान अलमल पर्न सक्ने वा खुसी नहुन सक्ने विषयबारे उनीहरू चिन्तित छन्।
के भविष्यमा धेरै मानिसहरूले थर फेर्नेछन्?
“हामीले यस विषयमा पहिले पनि कुरा गरेका थियौ र हामीले एक अर्काको सबै कुरा साटेको हुँदा थर अपनाउन उचित ठान्यौँ,” दक्षिणी स्विडेनमा बस्ने ३६ वर्षे निक निलसन-बीनले भने।
“मेरो मात्र थर राख्नु पुरातन अनि पुरानो शैली लाग्यो।”
केही जोडीले दुवैजनाको मिश्रित थर रोज्न थालेको पाइन्छ
अमेरिकामा पनि दुवैको थर राख्ने चलन बढ्दो क्रममा छ।